ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းနှင့်အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဝန်ထမ်းများသိစေရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာချမ်းငြိမ်းနှင့်အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဝန်ထမ်းများသိစေရန်
Posted by zaw mg on Sep 22, 2010 in News |7comments
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏လက်အောက်တွင်ရှိသော ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၄၇ ရပ်ကွက် အ.မ.က. ၂ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှ ပထမတန်း (က) အတန်းပိုင်ဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မိုးသည် ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြဌာန်းထားသောထုတ်ပြန်ချက်များအာုး လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိပဲ ဆရာကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းများအားဖောက်ဖျက် ကာ ကျောင်းဝန်းအတွင်းရှိ ကျောင်းစာသင်ခန်းဆောင်များအား ကျူရှင်ခန်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြောင်းသိရသည်။ကျောင်းသားကလေးတစ်ဦး လျှင် ကျူရှင်လခ ( ၁၅၀၀ ) နှုန်းဖြင့် ကျောင်းသားများအား ကျောင်းစာသင်ခန်များအးတွင်း ခေါ်ယူ သင်ကြားနေပြီး ကျူရှင်ယူသော ကလေးနှင့် ကျူရှင်မယူသောကလေးများအပေါ်တွင်လည်း ခွဲခြားဆက် ဆံပြောဆိုမှု့များရှိနေပြီး ကျူရှင်မယူ နိုင်သောကလေးများကိုလည်ုး ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများဖြင့် ဆက်ဆံနေကြောင်းကျောင်းသားမိဘများထံမှကြားသိရပါသည်။ စားမေးပွဲစစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်မရှိသော ပထမတန်းမှ လေးးများအား စာမေးပွဲဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ အတန်းပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုသုံးကာ အရည်အချင်း မှန်ကန်ပြီး နွမ်းပါးသောကလေးများအပေါ်တွင် ဆရာဂုဏ်ဖြင့် မပြည့်ဝသောလုပ်ရပ်များ၊ ငွေမျက် နှာကိုသာကြည့်သော လုပ်ရပ်များကို ကျင့်သုံးနေပါသောကြောင့် အာစရိယဂုဏ်အန္တောအနန္တော ဟူသော “မြတ်ဆရာ” ၏ ဂုဏ်အားလွန်စွာထိခိုက်ညိုးနွမ်းစေပါသည်။ အထက်ပါလုပ်ရပ်များအား ကိုယ်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရ ပါသောကြောင့်နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများမှတဆင့်သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများသို့ ကြည့်ရှုကြပ် မတ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးစေလိုသောကြောင့်အသိပေးလိုက်ရပါသည်။ မြတ်ဆရာဂုဏ်ဖြင့်ပြည့်ဝသော ဆရာများအား မျှော်မှန်း ရည်ရွယ်ပြီး ဆရာကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ အနာဂတ်သားသမီးကောင်းများအပေါ် ပဲ့ကိုင်ရှင်ဆရာများ ပီသစေရန် ဆန္ဒမှန်ဖြင့် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ကိုယ်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသူ မိဘတစ်ဦး
ဒီလိုလုပ်စားတဲ့ဆရာတွေကြောင့် ကျောင်းဆရာ/ မ တွေ ကျူရှင်သင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်လာပဲကြည့်ပါ ။ သူတို့အနေနဲ့ကလည်း အဲ့ဒီလိုလေးမှ ကြားပေါက်မရှာရင် အသုံးစရိတ်မလောက်ဖြစ်မှာကိုး ။ ကျောင်းဆရာမ ကျူရှင်သင်တာအပြစ်မရှိပေမဲ့.. စာသင်ခန်းကိုမသုံးသင့်ပါဘူး ။ အပြင်မှာသင်ပါ ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး ။နောက်ပြီး တပည့်တွေကို ကျောင်းမှာ ခွဲခြားဆက်ဆံဖို့လည်း မသင့်ပါဘူး ။ ကျူရှင် တတ်တဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ် ၊ ကျူရှင်မတတ်တဲ့ကလေးဖြစ်ဖြစ် စာသင်ခန်းထဲ ကျောင်းထဲမှာတော့ တန်းတူဆက်ဆံသင့်ပါတယ် ။ ဆရာက ဆရာစိတ်ရှိဖို့ လိုပါတယ် ။
အခု ဒီလို ကိစ္စ တွေအရမ်းများနေပြီ။ လုံးဝမကောင်းဘူး။ ကြာလာရင်ကလေးတွေပါ အဲဒီလို အကျင့်ဆိုး ကူးစက်ပြီး ဆိုးရွား နိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဆရာ၊ ဆရာမတို့ရေ အပိုဝင်ငွေ ရှာတာတော့ရှာပေါ့ဗျာ ကိုယ့်ဆီမှာ ကျူရှင်မယူတဲ့ကလေးကို ခွဲခြား ဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာ မကောင်းပါခင်ဗျား။ ကီုယ့်သိက္ခာကိုယ် ထိန်းပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Please send statement for her faults directly to Dr Chan and DG of ministry of education.It is better to solve it asap.Thanks.
ဒီကိစ္စတွေက ကျောင်းသား ရှိတဲ့ မိဘတွေ အိမ်မှာ ကြားနေရတဲ့ စကားတွေဘဲ။ ဒီစရိုက်တွေ ပျောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ အရင် စဉ်းစားရမယ်။ ဆရာတွေကို အရေးယူတော့လည်း ခဏဘဲ မယူဘဲ နေတော့လည်း ပိုဆိုး။ ပိုက်ဆံ ကျပ်တည်းတာလည်း ပါမယ်။ စေတနာ ဆရာဆိုတာ လောကမှာ မရှိတော့ဘူး အဲဒါကြောင့်လည်း ကျောင်းသားက ဆရာကို မကြောက်ဘူး အခပေး ဆရာလို့ တွေးနေကြတဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီ။
အပြင်မှာဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ ကျောင်းစာသင်ခန်းကိုတော့မလုပ် ကောင်းပါဘူး။
ကျောင်းတိုင်းမှာ လိုလို ကြားနေရတဲ့ case ပါ…ကလေးရဲ့စိတ်ကို အရမ်းထိခိုက်စေပါတယ်။
အဲ့လို ခွဲခြားဆက်ဆံတာက ကျောင်းတိုင်းလိုလို ဖြစ်နေပြီထင်တယ် . . .